February 1, 2021 - ApannPyay Media
သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ လိပ်ပြာတွေလာနားဖူးလား လိပ်ပြာတွေလာနားဖူးရင် အထူးသတိထားပါ
February 1, 2021 by ApannPyay Media
သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ လိပ်ပြာတွေလာနားဖူးလား လိပ်ပြာတွေလာနားဖူးရင် အထူးသတိထားပါ မင်္ဂလာပါ ချစ်ပရိတ် သတ်ကြီးရေ အရောင်အဆင်းအမျိုးမျိုးရှိပြီးချစ်စရာအသွင်ရှိကြတဲ့ လိပ်ပြာလေးတွေ ပန်းလေးတွေပေါ်ဝဲပျံ နေတာကိုမြင်ရတဲ့ အခါ မကြည်နူးတဲ့လူရယ်လို့ မရှိပါဘူး။ လူ တော်တော်များများက လိပ်ပြာတွေဟာ ပန်းဝတ်ရည်ကိုသာစုပ်ယူ စားသုံးတယ်လို့ သိကြတာပါ။ အမှန်တော့ လိပ်ပြာမဖြစ်ခင် ခူကောင်ဘဝမှာ သစ်ပင်ကအရွက်တွေကို စားပြီးကြီးပြင်းခဲ့ကြပြီး လိပ်ပြာဘဝမှာ ပုရွက်ဆိတ်ငယ်တွေ ပိုးမွှားတွေနဲ့ ပုပ်သိုး ဆွေးမြေ့နေတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေ အသီးအရွက်တွေကို သာမကတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ မစင်အပေါ်မှာပါ နားခိုပြီး စားသုံးကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လိပ်ပြာတစ်ကောင်ရဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းဟာနှစ်ပေါင်း ၅၆ သန်းနဲ့ချီပြီး ဖြစ်တည်နိုင်ပါတယ်။ နေ ဆားဓာတ်ရရှိဖို့ စုပ်ယူကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် လိပ်ပြာလေးတစ်ကောင် ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လာနားနေပြီဆိုရင်တော့ သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ ဆားဓာတ်လိုချင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ချွေးတွေသွေးထဲကနေတစ် ဆင့်ဆိုဒီယမ်ကို … Read more
ကျန်းမာမို့ အတွက် မှန်ကန်တဲ့ သွားလာနေထိုင်မှုပုံများ
ကျန်းမာမို့ အတွက် မှန်ကန်တဲ့ သွားလာနေထိုင်မှုပုံများ ကျန်းမာမို့ အတွက် မှန်ကန်တဲ့ သွားလာနေထိုင်မှုတွေကိုလဲ သိသင့်တယ်နော်………….. Photo crd ဖုန်းအသုံးပြုပုံ ကျောပိုးအိတ်လွယ်ပုံ အိပ်စက်ပုံ ထိုင်ပုံ မတ်တပ်ရပ်ပုံအနေအထား အလုပ်တွင်ကွန်ပြူတာသုံးချိန် ထိုင်သင့်ပုံ ကလေးချီထားချိိန် အိပ်စက်ရန်အကောင်းဆုံးအချိိန် ညမအိပ်ခင်အစာစားခြင်းရှောင်ပါ မနက်နဲ့ည ရေသောက်ချိန်အချိုးအစား မိုဘိုင်းဖုန်းပြောရင် ဘယ်ဘက်နားနဲ့နားထောင်ပါ ထမင်းစားပြီး ချက်ချင်းမလှဲပါနဲ့ ကျန်းမာမို့ အတွက် မှန်ကန်တဲ့ သွားလာနေထိုင်မှုပုံများ ကျန်းမာမို့ အတွက် မှန်ကန်တဲ့ သွားလာနေထိုင်မှုတွေကိုလဲ သိသင့်တယ်နော်………….. Photo crd က်န္းမာမို႔ အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ သြားလာေနထိုင္မႈပံုမ်ား က်န္းမာမို႔ အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ သြားလာေနထိုင္မႈေတြကိုလဲ သိသင့္တယ္ေနာ္………….. Photo crd ဖုန္းအသံုးျပဳပံု ေက်ာပိုးအိတ္လြယ္ပံု အိပ္စက္ပံု ထုိင္ပံု မတ္တပ္ရပ္ပံုအေနအထား အလုပ္တြင္ကြန္ျပဴတာသံုးခ်ိန္ … Read more
အလှအပအတွက်ရော ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အသုံးဝင်လှတဲ့ တစောင်းလက်ပတ်
အလှအပအတွက်ရော ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အသုံးဝင်လှတဲ့ တစောင်းလက်ပတ် ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့အသည်းကင်ဆာ တစောင်းလက်ပတ် ခေါ် ရှားစောင်းလက်ပတ်ဟု ခေါ်လိုက်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မသိသူ မရှိလောက်အောင်ပင် လူသိများလှသည်။ ဆေးအသုံးပြုပုံကို ပြည့်စုံအောင် သိသူရှား၏ ။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို အညာဒေသတစ်ဝိုက်တွင် သဘာဝပေါက်ပင်အဖြစ် ပေါများစွာတွေ့နိုင်ပေသည်။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ပင်သည် အပူဒါဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်သောသဘာဝ ရှိသည့် ထူးခြားသော အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အပင်၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် လွှသွားကဲ့သို့ ဆူးလေးများပါရှိကာ အခွံ၏အတွင်းထဲတွင်တော့ အေးမြစိုစွတ်သော ရှားစောင်းလက်ပတ်အနစ် ခေါ် ဂျယ်ရီတုံးကလေးများကိုထူးခြားစွာ တွေ့ရသည်။ ရှားစောင်းလပ်ပတ်၏ ထူးခြားချက်မှာ အပင်ကိုနတ်၍ ရက်ပေါင်းများစွာ ပစ်ထားစေကာမူ အပင်သည် ညိူးခြောက်မသွားဘဲ ရှင်သန်နေသည်ကို အံ့ဩဖွယ်ရာ တွေ့ရသည်။ ရက်ရှည် လများပစ်ထားသော်လည်း ညိူးခြောက်မသွားပဲ တာရှည်ခံခြင်းမှာ ရှားစောင်းလက်ပတ်အတွင်းသား ဂျယ်ရီတုံးကလေးများ အစို ဓာတ်ကို … Read more
နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းနိုင်ချေရှိသူများ နှလုံးရောဂါဆိုတာ လူတိုင်းကြားဖူးသိဖူးကြတဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကလူတွေကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပါ။ခုဆိုရင် တော်တော်များများဟာ “ဘယ်ဘက်ရင်ဘက်အောင့်တာ ” နဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာများလာဆိုပြီး ဆေးခန်းပြတာ စစ်ဆေးတာတွေလုပ်လာကြပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာနဲ့ ပတ်သက်လို့အတော်ဗဟုသုတ ရှိလာကြတယ်ပဲ ဆိုရမှာပါ။ဒီတစ်ခါတော့ ဒေါက်တာဇီဝကရဲ့ ဝါသနာအရ လူသိပ်မသိကြသေးတဲ့ ” ဘယ်လိုလူတွေမှာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနိုင်ခြေရှိတာလဲ” ဆိုတာလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ ၁- အသက်အရွယ်ကြီးလာသူတွေ ဒါကတော့ ရှောင်မရတဲ့ ဇရာပါပဲ။ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ သွေးကြောနံရံတွေ ထူလာတာကြောင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနိုင်ခြေ ရှိလာတာပါ။ သွေးဆုံးပြီးသား အမျိုးသမီး တွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ ၂- မိသားစုမျိုးရိုးရှိသူတွေ နှလုံးရောဂါဟာ သိသိသာသာ မျိုးရိုးလိုက်တဲ့အထဲ ပါ ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဆွေမျိုးရင်းချာထဲမှာ အသက် ၅၅နှစ်မတိုင်ခင် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းထားဖူးသူရှိရင် သေချာ သတိထားသင့်သူထဲ ပါ … Read more
ကိုယ်ပိုင်နာမည် အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ရေမွှေးထုတ်လုပ်ရောင်းချသွားမယ့် အိန္ဒြာကျော်ဇင်
ကိုယ်ပိုင်နာမည် အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ရေမွှေးထုတ်လုပ်ရောင်းချသွားမယ့် အိန္ဒြာကျော်ဇင် နှစ်ထပ်ကွမ်း အကယ်ဒမီဆုရှင် အိန္ဒြာကျော်ဇင် ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်နေသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ အခုဆိုရင် သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးနဲ့ သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ထောင်ထားပြီး စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဖြစ် သုဒြာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ အီတလီနိုင်ငံထုတ် The Bridge အမှတ်တံဆိပ် လက်ကိုင်အိတ်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်ယူရောင်းချနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း အိန္ဒြာကျော်ဇင်က သူမရဲ့ နာမည် Eaindra Kyaw Zin ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ အီတလီနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တစ်မျိုးကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ် ရောင်းချသွားတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ Eaindra Kyaw Zin ရေမွှေးကတော့ မနေ့က ဇန်နဝါရီလ (၃၀) … Read more
အားနာတတ်တိုင်း ကောင်းသလား တောင်းရမ်းရမှာ အားနာတော့၊ သူတောင်းစား ငတ်သေသွားတယ်။အကြွေးတောင်းရမှာ အားနာတော့၊ ဆိုင်လုံးလုံးပိတ်လိုက်ရတယ်။ ချစ်ခွင့်တောင်းရမှာ အားနာတော့၊ ချစ်တဲ့သူ သူများနောက်ပါသွားတယ်။ပြတ်ပြတ်သားသားဆွေးနွေးရမှာ အားနာတော့၊ သူများနဲ့ အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ ထူးချွန်တဲ့လူတွေနဲ့ ကပ်ပေါင်းရမှာ အားနာတော့၊ တစ်ဖြည်းဖြည်း ရိုးအသွားတယ်။အမှားဝန်ခံရမှာ အားနာတော့၊ ပြုပြင်ဖို့ အခွင့်အရေး နည်းပါးသွားတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို အားမနာတတ်ဘူးလို့ပြောရင်၊ အပြစ်တင်တဲ့စကားဖြစ်ပေမဲ့ အားနာတတ်လွန်းရင် စိတ်ပျော့ညံ့မှု တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အပြင် အလုပ်ဖြစ်ဖို့ လုံးဝအတားအဆီးဖြစ်ပါကြောင်း။ CreditOriginalUploader အားနာတတ္တိုင္း ေကာင္းသလား ေတာင္းရမ္းရမွာ အားနာေတာ့၊ သူေတာင္းစား ငတ္ေသသြားတယ္။အေႂကြးေတာင္းရမွာ အားနာေတာ့၊ ဆိုင္လုံးလုံးပိတ္လိုက္ရတယ္။ ခ်စ္ခြင့္ေတာင္းရမွာ အားနာေတာ့၊ ခ်စ္တဲ့သူ သူမ်ားေနာက္ပါသြားတယ္။ျပတ္ျပတ္သားသားေဆြးေႏြးရမွာ အားနာေတာ့၊ သူမ်ားနဲ႔ အလုပ္ျဖစ္သြားတယ္။ ထူးခြၽန္တဲ့လူေတြနဲ႔ ကပ္ေပါင္းရမွာ အားနာေတာ့၊ တစ္ျဖည္းျဖည္း ႐ိုးအသြားတယ္။အမွားဝန္ခံရမွာ အားနာေတာ့၊ ျပဳျပင္ဖို႔ … Read more
ဒူးနာ ခါးနာနပေါသလား…ရဲယိုသီးကိုသာ အားကိုးပါ
ဒူးနာ ခါးနာနပေါသလား…ရဲယိုသီးကိုသာ အားကိုးပါ ရဲယိုသီး(Noni Fruit)ကို အစေ့ထုတ်ပစ်ပြီး ကျန်ရှိတဲ့အနှစ်ကို ညက်ညက်ကြေအောင် ချေမွ၍ ဓာတ်ဆီ(Petro)ဖြင့် ပုလင်းထဲ၌ ဆတူရောစပ်ပြီး နေ သုံရက်ခန့် လှန်းပေးပါ။ သုံးရက်ခန့်ကြာသောအခါ ရဲယိုသီးနှင့် ဓာတ်ဆီရောစပ်ထားသော အနှစ်ကို မိမိ ဒူးနာ ခါးနာနေသော နေရာ၌ စိမ့်ဝင်သွားအောင် ပွတ်လိမ်းပြီး အဝတ်စ ပါးပါးဖြင့်ဖုံးအုပ် စည်းပေးထားလိုက်ပါ။ မနက်ည တစ်နေ့ ၂ကြိမ် လိမ်းပေးပါက ဝေဒနာကိုပျောက်ကင်းသက်သာစေပါသည်။ မေတ္တာဖြင့် ” ရောင်ပြန် ” ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ ဒူးနာ ခါးနာေနပါသလား…ရဲယိုသီးကိုသာ အားကုိးပါ ရဲယိုသီး(Noni Fruit)ကို အေစ့ထုတ္ပစ္ၿပီး က်န္ရွိတဲ့အႏွစ္ကို ညက္ညက္ေၾကေအာင္ ေခ်မြ၍ ဓာတ္ဆီ(Petro)ျဖင့္ ပုလင္းထဲ၌ ဆတူေရာစပ္ၿပီး ေန သုံရက္ခန္႔ လွန္းေပးပါ။ သုံးရက္ခန္႔ၾကာေသာအခါ ရဲယိုသီးႏွင့္ … Read more
ဓမ္မရံကြီး ဘုရားရဲ့ အနောက်ဘက်တောလမ်းမှာ အတွဲတစ်တွဲ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ ချွေးတွေလဲပြန်နေလို့ မေးကြည့်လိုက်သောအခါ အခုညနေ့ မြင်းလှည်းနဲ့ ဧည်သယ်ကို sunset ကုန်ပို့ပြီး အပြန် ဓမ္မရံကြီး ဘုရားရဲ့ အနောက်ဘက် တောလမ်းမှာ ပိုက်ဆံ အိပ်တစ်လုံးတွေ့တယ်… ကျွန်တော်လဲ ပိုက်ဆံအိပ်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးပဲ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်.. အိမ်ရောက်ရင် Face Book တင်ပြီး ပိုင်ရှင်ကိုတွေ့ရင်ပြန်ပေးမယ်လို့ စဉ်းစားပြီး မောင်းလာခဲ့တာပေါ့… ဇီးရိပ် အကြော်ဆိုင်နားရောက် တော့ E- Bike နဲ့ အတွဲတစ်တွဲ ပြာပြာ ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့ ချွေးတွေလဲ ပြန်နေတာ့ သတိထားမိတာ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ အကိုရေ ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ လို့မေးတော့ ပိုက်ဆံအိတ် ပျောက်လို့လိုက်ရှာနေတာတဲ့ ကျွန်တော်လဲ … Read more
မြေပဲကိုပြုတ်စားပေးပါက ဓာတ်မတည့်မှုအခြေအနေ သက်သာပျောက်ကင်းနိုင် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် လူ ၁၀၀ မှာ တစ်ယောက်နှုန်းနဲ့ မြေပဲ ဓာတ်မတည့်မှုအခြေအနေရှိနေတာဖြစ်ပြီး မြေပဲပါတဲ့အစားအစာတွေစားသုံးမိလို့ အခန့်မသင့်ရင် ပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ အသက်သေဆုံးတဲ့အထိ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အင်ပီရီး ယယ်ကောလိပ်လန်ဒန်မှ သုတေသနလေ့လာမှုအရ မြေပဲတွေ ကို မိနစ် ၂၀ ကနေ နာရီဝက်ကြာမျှ ရေနဲ့ထည့်ပြုတ်လိုက်မယ်ဆို ရင် ပြင်းထန်တဲ့ဓာတ်မတည့်တုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပရိုတင်း ဓာတ်တချို့ကို စွန့်ထုတ်ဆေးကြောပစ်လိုက်သလိုဖြစ်သွား တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆေးပညာဆိုင်ရာကြီးကြပ် စောင့်ရှောက် မှုအောက်မှာ မြေပဲဓာတ်မတည့်သူတွေကို ပြုတ်ပြီးသားမြေပဲ နည်းနည်းချင်းစီကို တစ်ပတ်ကို ခြောက်လုံးကနေ တစ်နှစ်ကျော် ကြာတဲ့အခါ တစ်ပတ်ရှစ်လုံးထိ တိုးကျွေးသွားကာ ဓာတ်မတည့် မှုတုံ့ပြန်တာကို နှိမ်နင်းနိုင်လာအောင် ကျင့်ပေးတဲ့နည်းနဲ့ မြေပဲ ဓာတ်မတည့်မှုသက်သာပျောက်ကင်းသွားစေနိုင်တယ်လို့ လေ့ လာမှုက ဆိုပါတယ်။ (DM, 14.1.2021) … Read more
၂၄ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံး တိုက်လို့ရပါပြီ သိန်း ၁၅၀၀၀ ကဆ-၄၂၅၉၇၂ …………. သိန်း ၁၀၀၀၀ ဇ ၄၉၆၀၃၅ ……….. သိန်း ၅၀၀၀ ကဇ ၃၂၉၄၆၇ ကစ ၉၈၈၄၂၅ ………….. သိန်း ၂၀၀၀ ဘ ၉၇၅၁၆၃ အ ၇၈၀၉၆၃ ဍ ၇၄၁၆၅၅ က ၈၈၈၁၀၅ ……………. သိန်း ၁၀၀၀ ကစ ၂၀၈၉၉၅ ထ ၃၆၈၁၈၃ ဌ ၅၆၄၃၉၆ တ ၅၉၃၉၆၉ ပ ၃၂၀၅၃၉ ဍ ၉၈၉၀၀၁ ပ ၁၉၆၆၉၂ ကက ၇၂၉၅၃၂ …………….. ၃ သိန်းဆု ကဃ ၁၁၄၄၆ ဟ … Read more